Masoivohon'i Kolombia dia manolotra mari-pahaizana amin'ny World Tourism Organization (UNWTO)
Home » Travel Associations News » Masoivohon'i Kolombia dia manolotra mari-pahaizana amin'ny World Tourism Organization (UNWTO)
Jona 10, 2017
Ny masoivohon'i Kolombia, IZY Mr Alberto Jacobo Furmanski Goldstein, dia nanolotra ny taratasy fahazoany alalana amin'ny Sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO), Taleb Rifai, nanolotra azy ho solontena maharitry ny fireneny ho an'ny UNWTO. UNWTO dia maso ivoho an'ny Firenena Mikambana misahana ny fizahan-tany ary monina any Madrid, Espana. Nandritra ny fihaonana dia naneho ny fanapahan-kevitry ny maso ivoho Furmanski ny Fikambanana hanohy hanamafy ny fifandraisany akaiky amin'i Kolombia.
Nahazo fahatongavana mpizahatany iraisam-pirenena 3.3 tapitrisa i Kolombia tamin'ny 2016; miampy 11%, mitentina 4.7 miliara dolara amerikana amin'ny rosia. i Kolombia dia efa mpikambana ao amin'ny UNWTO hatramin'ny taona 1975.
Ny masoivohon'i Mexico dia manolotra taratasy fanamarinana ho an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO)
Cunard dia nanambara ny fahavitan'ny fanavaozana ny vola $ 40 tapitrisa an'ny Mpanjakavavy Victoria